Boho Floral Print Ruffles V-Neck Split Wrap Maxi Dress | ဝယ်ပါ။ WoopShop®
မှတ်ချက်: P ကိုလက်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းကြောင့် 1-3 စင်တီမီတာ ကွာခြားမှုကို ငှားရမ်းခွင့်ပြုပါ။ (တိုင်းတာမှုအားလုံးကို စင်တီမီတာနှင့် 1cm=0.39လက်မ သတိပြုပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောကွန်ပျူတာများကိုကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်းကိုပြသသည့်အတိုင်းအမှန်တကယ်ကို item ၏အရောင်ကွဲပြားစေခြင်းငှါ အနည်းငယ်အထက်တွင်ပုံရိပ်တွေကနေ။
Пришло быстро, сшито где-то аккуратно, где-то не оч. Запах платье не имеет။ За такую ​​цену огонь!
ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတိယမြောက် အော်ဒါဖြစ်ပြီး ပထမတစ်မျိုးက အဝါရောင် ကြိုက်တယ်။ အလွန်လျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်း။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
Адская синтетика, и довольно большое, я буду ушивать скорее всего.. но в целом, пару раз одеть. - нормать